नेकपा विवाद : ओली, प्रचण्ड, नेपालका आ–आफ्ना तयारी – HostKhabar ::
नेकपा विवाद : ओली, प्रचण्ड, नेपालका आ–आफ्ना तयारी
by शुरोजङ्ग पाण्डे
काठमाण्डौं /नयाँ पत्रिका दैनिक : अध्यादेश प्रकरणले शीर्ष तहमै टकराव र ध्रुवीकरण बढेपछि नेकपाका प्रमुख तीन नेता छलफल र परामर्शमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आइतबारबाट बेग्ला–बेग्लै परामर्शमा सक्रिय भए । तीनजनै शीर्ष नेताहरूले भावी कदम र अबका रणनीतिमा केन्द्रित रहेर समूहका नेताहरूसँग परामर्श लिएका हुन् । आइतबार साँझसम्म शीर्ष नेतृत्वबीच ठोस समझदारी बनेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानैदेखि साँझसम्म निकट नेता, मन्त्रीहरू तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक परिस्थितिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनभर परामर्श गरेको बताए । उनले पार्टी एकता खल्बलिन नदिन शीर्षसहितका नेताहरूसँग अझ बाक्लो संवाद गर्न सुझाब दिएको पनि जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार ६–७ घन्टासम्म लगातार परामर्श लिनुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुको कुनै विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाब उल्लेख गर्दै नेम्वाङले भने, ‘जनताले एकताको विश्वाससहित मुलुकको नेतृत्व गर्न मतदान गरेकाले त्यसलाई भत्किन दिनुहुन्न, त्यसैले शीर्षसहितका नेताहरूसँग बाक्लो संवाद गर्नुस् भन्ने सुझाब दिएको छु ।’
नेम्वाङसहित मुख्यसचिव र कानुनसचिवसँगको छलफलमा राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता र साबिक कानुन ब्युँताउनका लागि पुनः जगाउने अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा पनि बेग्लै परामर्श गरेका थिए ।
प्रचण्डले निजी निवास खुमलटारमा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बैठक छल्ने प्रयासमै रहे पनि दबाबपछि सोमबार बेलुकीसम्म सचिवालय बैठक बस्ने सम्भावना रहेको र त्यहीँबाट स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्ने आफूनिकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमार्फत प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारकै विकल्प खोज्ने तयारीसहित रणनीति बनाएको भन्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उता, प्रचण्ड र नेपालले भने ओलीले बैठक छल्ने प्रयास भएकाले त्यसका लागि दबाब दिँदै छलफलमा उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर निकटहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी एकता बचाएर अघि बढ्न कमजोरी सच्याएर मिलेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहेको सन्देश दिएको जानकारी पनि गराएका थिए । ‘उहाँले मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरे पनि केमा कसरी मिल्ने कुनै ठोस प्रस्ताव दिनुभएन,’ नेपालको भनाइ थियो । यद्यपि, पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका कमजोरी सच्याउने र पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको पनि ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । नेपालपक्षीय नेताहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने, एक व्यक्ति ः एक पदको जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेताहरूको कार्यविभाजन हुनुपर्ने विषयलाई उठान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । केही महिनादेखि अनौपचारिक तहमा चलिरहेको ‘पावरसेयरिङ’को प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि छलफलले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
बैठक माग गर्दै २० जना नेताले लिखित पत्र बुझाउनुभएको थियो, सचिवालय र स्थायी समिति बैठक तय भयो कि भएको छैन ?
अहिलेसम्म मिति तय भइसकेको छैन ।
किन हुन सकिरहेको छैन त ?
हाम्रो बैठक कि दुई अध्यक्षले बोलाउनुपर्छ, कि सम्बन्धित कमिटीका एकतिहाइ सदस्यले बैठकको माग गर्नुपर्छ र विधानबमोजिम बैठक बोलाउनुपर्छ । अहिले स्थायी समितिको एकतिहाइ सदस्यले बैठकको माग गर्नुभएको छ । त्यसकारण विधानसम्मत ढंगले बैठक अविलम्ब बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुई अध्यादेशबारे सचिवालयमै विवाद भएको थियो, पछिल्लोपटक त्यही प्रसंगलाई समेत लिएर लिखित रूपमै माग हुँदा पनि किन सम्बोधन हुन सकेन?
यही त अनौठो, आश्चर्यजनक छ । पार्टी कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्‍यो भने पार्टीमा समस्या हुँदैन । तर, बैठकलाई एभोइड गर्न खोज्यो, बैठकबाट भाग्न खोजियो भने समस्याहरू आउँछन् ।
बैठककै सन्दर्भमा नेताहरूबीचको शनिबार भएको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले रुचि नदेखाउँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठक छल्ने हो भने बरु राजीनामा दिएर आराम गर्नुस् भनेकोसम्मका कुरा बाहिर आयो, के त्यस्तै परिस्थिति आइसकेको हो ?
त्यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन र मेरो कुनै टिप्पणी पनि छैन ।
त्यसो भए उपाध्यक्ष गौतमले किन वक्तव्य निकाल्नुभयो त ?
मैले त्यो वक्तव्य हेरेकै छैन, हेरेपछि मात्र कुरा गरौँला ।
यदि माग भएअनुसार अविलम्ब बैठक डाकिएन भने के हुन्छ ?
परिस्थिति अलि जटिल हुन्छ, त्यसले उहाँलाई हित गर्दैन ।
परिस्थिति जटिल हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईंहरूको भैँसेपाटी बैठकले प्रधानमन्त्री सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेजस्तै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अब त्यसबारे हामीले पार्टी कमिटीभित्रै छलफल गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटीले समीक्षा र मूल्यांकन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ त ?
मेरो व्यक्तिगत कुरा अहिले भन्न मिल्दैन, पार्टी कमिटी बैठकमा भन्छु ।
त्यसो भए भैँसेपाटीको तपाईंहरूको पछिल्लो समझदारी के हो ?
पछिल्लो समझदारी केही पनि भएको छैन । बैठक चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने माग छ, तर बैठक भएको छैन, स्थिति यही हो ।